Mpiasa 280 eo anivon�ny Ministeran�ny serasera malagasy no notolorana mariboninahitra noho ny asa vitany. Ny Alakamisy 20 martsa 2014 no notanterahina ny lanonana fanolorana izany, izay niarahan�ny fianakaviambe ny ministera ahitana ny ORTM, TVM, RNM, DIT, ANTA, CEFOM, sy ny mpandraharaha eo anivon�ny Ministera foibe . Nisy ny notolorana ny Grand Officier de l�Ordre National, ny Officier sy ny Chevalier de l�Ordre National ary ny M�daille de Travail isan�tsokajiny.
Maro tamin�ireo notolorana mariboninahitra ireo no niasa teto anivon�ny Televiziona Malagasy nandritra ny 30 taona no mihoatra ary namela mamy ho an�ity fahitalavim-pirenena ity. Misy no efa misotro ronono amin�izy ireo, eo koa nefa ireo mbola manohy hatrany ny asany. Eo ireo mpanao gazety nahafantaran�ny mpijery izany Tvm izany. Maro koa nefa ireo teknisianina izay tsy dia fantatry ny mpijery loatra nefa manome ny fahaizany sy ny herimpony hanatsarana hatrany ny fampitana ny sary sy ny feo ho any an-tokatrano tsirairay any. Eo koa ireo mpandraharaha mampiodina ny asa aman-draharaha rehetra eo anivon�ity orinasam-panjakana ity.
Niverimberina ny hoe � fampitana traikefa � eo amin�ireo zokiolona sy ireo tanora marobe manohy ny asa ankehitriny . Fiarahana miezaka eo amin�ny fanatsarana hanomezana fahafaham-po ho an�ny mpijery ny fahitalavitra no ho tohizana. Ny tanjona amin�izany dia tsy miova, dia ny hanabe, hapita vaovao ary ny hampiala voly ny malagasy maneran-tany, ary ny hametraka ny Televiziona Malagasy eo amin�ny toerana medrika azy amin�ny maha fahitalavim-pirenena azy.
Malagasy | Francais
TVM © 2013. All Rights Reserved.